Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Ronald Koeman hoodmụaka Akụkọ Ihe Mere Ezigbo akụkọ ndụ Ezughị oke
Akụkọ ndụ anyị nke Ronald Koeman na-akụda ozi banyere Akụkọ nwata, ndụ ya, ndị nne na nna, ndụ ezinụlọ, na nwunye, ụmụaka, uru na ndụ.
Na nkenke, anyị edekọtara ihe ndepụta zuru oke nke na-ekpughe ihe omume dị mkpa na ndụ onwe onye Ronald Koman, malite na nwata ruo n'oge ọ ghọrọ onye a ma ama.
Akụkọ ndụ Ronald Koeman.
Ee, onye ọ bụla maara banyere agụụ ya na-adịgide adịgide maka Barcelona ma soro klọb na-eme ihe dị ka onye ọkpụkpọ.
Agbanyeghị, ọ bụghị ọtụtụ ewepụta oge iji gafere akụkọ ndụ Ronald Koeman nke na-akpali akpali. Ugbu a na-ebuteghị oge ọzọ, ka anyị bido na nwata na ezinụlọ ya.
Akụkọ banyere nwata nke Ronald Koeman:
Maka ndị na-ebido ihe ndekọ banyere ndụ ya, ndị Dutch nwere aha ahụ bụ "Tintin". A mụrụ Ronald Koeman na 21st ụbọchị Machị 1963 na nne ya, Marijke Koeman na nna, Martin Koeman n'obodo Zaandam, Netherlands.
Onye njikwa FC Barcelona bụ nke abụọ n'ime ụmụaka abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya na-aga nke ọma.
Ronald Koeman Oge Ndụ:
Maka ndị Dutch, itolite na 1960s bụ ihe ọchị. Oge nwata Ronald Koeman nọrọ na obodo Zaandam nke dị na North Holland, Netherland. Ọ fọrọ nke nta ka ọ dịrị ndụ ma na-eku ume egwuregwu bọọlụ mgbe ọ na-etolite na nwanne nwoke nke okenye Erwin.
Duo na-egwuri egwu n'okporo ámá ruo ọtụtụ awa iji mee ka nna ha nwee obi ụtọ. N'oge ụfọdụ, nne ha na-esi na mbara ihu ahụ tụpụrụ ha nri iji nweta ume.
Foto nwata bụ Ronald Koeman ya na nwanne ya nwoke nke okenye na nna ya.
Ezigbo Ezinụlọ Ronald Koeman:
Ikekwe ị maghị, nne na nna Ronald Koeman bụ ụmụ amaala etiti Netherlands. Nna ya Martin bụ onye bọlbụ afọ ole na ole tupu a mụọ ya. N'ihi ya, ezinụlọ ha amaghị ụkọ.
Maka ndị na-amaghị, onye njikwa FC Barcelona bụ agbụrụ Dutch dị ka ọtụtụ ụmụ amaala Netherlands. N'ezie, Dutch bụ asụsụ gọọmentị nke mba ahụ nke na-etu ọnụ maka egwuregwu dị ịtụnanya dị ka Virgil van Dijk na Matthijs de Ligt.
Ronald Koeman Football Akụkọ:
"Tintin" malitere njem ya na bọọlụ ọkachamara na klọb mpaghara VV Helpman na GRG Groningen. Ọ gara n'ihu na FC Groningen wee mee ka ọ bụrụ onye mbụ na afọ 17.
Ọ bụ ezie na Koeman bụ onye na-agbachitere ya, ọ nwere ike ịchọta azụ nke ụgbụ 33 ugboro 90 ọhụụ maka klọb. Ọdịdị ọfụma ọ gara n'ihu na Ajax nke o nyere aka merie aha Eredivisie.
Koeman gara sonyere PSV Eindhoven nke meriri Eredivisie ugboro atọ na otu ụlọ ọrụ Europe n'oge ya na ha.
N'elu ọrụ ya dị ka onye na-egwu egwu, Koeman hụrụ Barcelona ka ọ bụrụ okpukpu anọ nke La Liga gụnyere European Cup. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ sonyere Feyenoord ma kwụnye akpụkpọ ụkwụ ya mgbe ya na ha nwere oge ole na ole.
Ronald Koeman Biography - tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Ndị ọkachamara na-egwu egwuregwu ahụ enwetaghị ọkwa mbụ ya dị ka onye isi nchịkwa ozugbo ọ lara ezumike nká. Ọ bụ onye mbụ so na ndị ọrụ nchịkwa mba Netherlands n'oge 1998 FIFA World Cup.
Nhọpụta ahụ enweghị ike ịbanye na eziokwu ahụ ọ meriri 1988 Euro iko ya na ndị otu mba dị ka onye ọkpụkpọ.
O nwekwara obi uto ya na Barcelona dị ka onye inyeaka nchịkwa tupu ya abanye na klọb njikwa mbụ na 2000 dị ka isi nke ọgbakọ Dutch bọọlụ Vitesse. Klọb ahụ na-agba ọsọ na obere ego mana Koeman mere ike ya niile iji duru ha gaa ebe UEFA Cup.
Otu esi Ronald Koeman buru nke oma:
Ọrụ ndị Dutch na-esote dị ka onye njikwa hụrụ ya nwere ọrụ nlekọta na-achịkwa ọrụ gụnyere Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ na Feyenoord.
Ọnụ ọgụgụ kasị elu nke Koeman na-azụ ọrụ bụ nchụso ya na Premier League dị ka onye njikwa Southampton.
Mgbe ya na akụkụ bekee nọchiri anya ya Mauricio Pochettino, Dutch ugboro atọ aha ya bụ onye njikwa otu nke ọnwa n'oge 2014-2015 na oge 2015-2016.
Onye Dutch ahụ ghọrọ onye njikwa nke abụọ mgbe oge nke David Moyes ịkụzi Everton n'etiti 2016-2017. Emekwara ya onye njikwa nke ndị otu mba Netherlands na 2018.
Nlaghachi Koeman na Barcelona dị ka onye isi nchịkwa ha mgbe ụlọ ọrụ ahụ kewara Quique Seiten kwuru hụrụ ọtụtụ ndị ọkpọ klọb ahụ, dịka ogologo oge na-abịa.
Maka ndị na-agba bọọlụ, enweghi ike ịnweta akụkọ ọhụụ nke Barcelona ọhụrụ na-enweghị achọta akụkọ ịhụnanya ya na klọb.
N'ezie, ọtụtụ kwenyere na ọ nwere ike ịbụ onye ziri ezi iji duzie ọgbakọ Catalan na ụzọ nke ebube na-eso oge ihere 2019/2020 ha na-eme n'okpuru Quique Setién. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Banyere Ronald Koeman Nwunye na Childrenmụaka:
Maka ndị agbụrụ ya, a na-atụ anya na onye Dutch na-aga nke ọma kwesịrị inwe mmekọrịta mara mma na-arụ ọrụ maka ya.
Eziokwu bụ, ọ naghị emechu ihu na nke ahụ. Nwunye Ronald Koeman na-akpọ Bartina. Onye njikwa nke Barcelona soro ya wara wara na December 1985 ma ha na-enwe ọ aụ ma emesịa.
Mmekọrịta dị n'etiti Ronald Koeman na nwunye ya gọziri ụmụ atọ. Ha gụnyere nwa nwanyị Debbie na ụmụ nwoke Ronald Koeman Jr na Tim. N'ime ụmụ Koeman niile, Ronald Jnr bụ naanị onye kpebiri ịgbaso nzọụkwụ nna ya.
N'oge ọ na-ede akụkọ ndụ nna ya, Ronald Jnr na-egwuri egwu dị ka onye na-eche nche maka ọgbakọ FC Oss nke bụ ọkwa nke abụọ kachasị elu na Netherlands.
Site na RL Ronald Koeman, Debbie, Tim, Bartina na Ronald Koeman Jr.
Ndụ Ronald Koeman Ezinụlọ:
"Tintin" ji ihe ịga nke ọma ya na ọrụ football na njikwa maka ịhụnanya na nkwado ọ na-enweta site na ezinụlọ. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna Ronald Koeman. Ọzọkwa, a ga-akọwapụta eziokwu banyere agbụrụ ezinụlọ ya ebe a.
Banyere Ronald Koeman nne na nna:
Nna nna ezinụlọ ahụ bụ Martin bụ ndị ama ama ji azụmaahịa ya na klọb mpaghara. O mekwara ka ndị otu mba Netherlands pụta mba ofesi tupu ha ekunye akpụkpọ ụkwụ ya. Martin nwụrụ na 2013 ma - ruo afọ ahụ - na-etinye aka na bọl.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke nna Ronald Koeman n'oge dị ka ndị ịgba egwu.
Mama Ronald Koeman, Marijke nwere ike ọ gaghị abụ onye a ma ama mana ọrụ ya n'ịzụlite onye njikwa na-ekwu okwu banyere ọrụ dị oke mkpa ọ rụrụ.
Ronalmụnna Ronald Koeman:
N'ịbụ onye na-agafe site na nne na nna ya, nwanne ya nwoke nke okenye Erwin na-abanyekwa n'egwuregwu football dị ka onye njikwa mgbe ọ nwụsịrị ọrụ ịgba bọl.
Ọ bụ onye isi nchịkwa nke ndị otu mba Oman ma nwee ọtụtụ afọ ahụmahụ na njikwa.
Zute nwanne nwoke njikwa ahụ Erwin.
Onye bụ ndị ikwu Ronald Koeman?:
Amaghị ihe dị ukwuu banyere agbụrụ ezinụlọ onye njikwa. Karịsịa dịka o metụtara nne na nna ya na nne nne ya. O nweghi nne nna ya na nne nne ya amaghi ka amatabeghị ụmụ nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Ikekwe, ị jụọla ajụjụ a… Ọnye na-bụ Ronald Koman?
Ugbu a bụ oge iji wetara gị ọdịdị ya na egwu. Nke mbu, enwere otutu ihe kariri igha egwu na ikuzi egwu. Ronald Koeman ghọtara nke ahụ nke ọma na ọ bụ onye ukwu na isoro ndị ọzọ na-abụghị ndị ahịa afụ ọrụ.
Ọtụtụ na-ele ya anya dị ka onye dị ebube nke nwere ọgụgụ isi, nwee nchekwube, nwee ọ cheụ ma na-emeghe ekpughe eziokwu banyere ndụ ya na nke onwe ya. Ọ hụrụ ịgba ígwè, ịgụ akwụkwọ, ile ihe nkiri na-amasị ya na egwuregwu ndị ọzọ.
Gba ígwè bụ otu n'ime ihe omume ntụrụndụ ya.
Ndụ Ronald Koeman:
Ka anyị tụlee ụgbụ nchịkwa nke bara uru na 2020 na ihe ọ na-eme iji nweta ego. Onu ogugu nke Koeman ruru $ 8 nde. ndị na-egwu bọọlụ na ndị njikwa na-akwụ ụgwọ nke ọma, mmepe nke na-akọwa ihe kpatara onye nchịkwa ji baa ọgaranya.
Dika ugwo oru Koeman, ugwo ya na ego ya, ya onwe ya nwekwara ego na aghota ya site na nkwado na nkwado.
Onye nchịkwa na-agba ịnyịnya Bentley Car ma biri n'ụlọ dị oke ọnụ na ụlọ na-ekwupụta ọnụ ahịa ya.
Eziokwu Ronald Koeman:
N'ebe a, anyị na-ewetara obere akụkọ amaara ama mara mma ahaziri nke ọma ahaziri iji nyere gị aka inweta nkọwa zuru oke nke onye njikwa ahụ.
Eziokwu # 1 - Football Guzosie:
Ezinụlọ ndị isi nwere nguzo na Groningen FC. Ọnọdụ a bụ ekele maka onyinye Koeman na-aga nke ọma klọb. Onye njikwa ahụ na nwanne ya nwoke malitere ọrụ ha na klọb ebe nna ha nyekwara aka melite agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ.
Eziokwu # 2 - Nkuzi nkuzi:
Koeman na nwanne ya nwoke bụ ụmụnne mbụ jisiri ike otu mba n'otu oge. Mgbe "Tintin" bụ onye nchịkwa nke Netherlands, Erwin nwanne ya na-elekọta Oman. Zingtụnanya, ọ bụghị ya?
Eziokwu # 3 - Nnukwu Onye Nkwado:
Dịka onye ọkpụkpọ, Koeman abanye n'ime akwụkwọ ndekọ dị ka otu n'ime ndị egwuregwu ole na ole ga-egwu maka ndị egwuregwu atọ nke obodo Dutch. Ndị klọb a gụnyere PSC, Ajax na Feyenoord. Na mgbakwunye, ihe mgbaru ọsọ ya bụ nke 193 na egwuregwu 533 dị n'etiti ihe mgbaru ọsọ kachasị elu nke onye na-agbachitere gbagoro.
Okpukpe Koeman amabeghị. Agbanyeghị, iwepu ego na aha ndị Kraist nke nna ya na nwa ya nwanyị na-aza na-egosi na ọ bụ onye kwere ekwe nke na-ekpe Kraịst.
Eziokwu # 5 - Banyere aha ya:
Ronald Koeman na-eitatingomi agwa Tintin nke eserese.
Enyere Koeman aha "Tintin" mgbe ọ na-egwu maka Barcelona. Ọ bụ n'ihi na ya na onye na-ese ihe nkiri na albino ozodimgba dị na zoo Barcelona n'oge ahụ.
Anyị achịkọtala akụkọ ndụ Ronald Koeman na tebụl dị n'okpuru ka ị nwee ike nweta ozi gbasara ya.
Aha n'uju Ronald Koeman
aha otutu Tintin
Ụbọchị ọmụmụ Bọchị 21 nke Mach 1963
Ebe amụrụ onye Zaandam na Netherlands
Ndị nne na nna Martin na Marijke
Children Ronald Koeman Jr, Tim na Debbie
omume ntụrụndụ Ngba ịnyịnya, ịgụ na ile fim.
Ngwakọta Net $ 8 Nde
Ọkachamara football Manager
Daalụ maka ịgụ Bio nke Ronald Koeman. Anyị nwere olile anya na o kwenyesiri gị ike na ihe ịga nke ọma abụghị omume kama ọ bụ omume.
Na lifebogger anyị na-eme ziri ezi na ịzi ezi okwu anyị na-ewepụta ncheta gbasara ndị ọrụ bọọlụ kachasị amasị gị. Hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya na Biog? Mee nke ọma ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụ hapụ okwu n'okpuru.